– Our raaxo Silver waxyaabaha udugga leh Shumaca dabool waa sidaas oo gaar ah oo muddo dheer socota, waa inuu noqon doono hit ah ee gurigaaga ama ganacsiga. • SAAFI AH – 100% Saafi ah horyaalka koray Soy Bean Wax – Free ka Kiimikada, doogga, waxaa AAN siibtey iyo Kosher Ruqsado. • DEEGAAN – cusboonaysiin karo & Baaba'aysa isticmaalaya ah maaddooyinka ugu sarreeya-Quality. • OF FREE – Petroleum, Palm, Shito By-Products, formaldehyde, lagu daro, jilciye, Parabens, Cayayaanka iyo doogga, hubinta nadiif ah, si mug leh xitaa gubi. • handmade – Shumac waxaa gacanta lagu dhigay iyo gacan-ku shubtay. Waxaan loo hubiyo in dhammaan qaybaha yihiin si masuuliyad illaha iyo kulmi heerka ugu sareeya.